ရခိုင်ကဗျာ | ngalone
Tag Archives: ရခိုင်ကဗျာ
တည် မြဲနီဆဲ၊ ရဲနီဆဲမို့
ဗြီးဖို့အသေချာ၊ လမ်းကို ရှာထား
နယ့်ချဲ့အဝင်စား၊ မိစ္ဆာများ ။ …။
ကဗျာချေ တစ်ပုဒ် ………..
ရခိုင်သမ မဟုတ်လို့ ….
…ရင်နာနာနဲ့ …. ။
ရခရေ အလုပ်ချေ တစ်ခု …
ရခိုင်အတွက် မဟုတ်လို့ …
ဒေကောင် ကို အရူးဆိုဖို့လား …
အသည်းတိ ကွဲပနာ ..
ဘ၀တိ လဲပနာ …
ကိုယ်ထင် ကုတင်ရွှေနန်းလတ် ..
.. အားလုံးကို အာခံနီတုန်း ..။
ရခိုင်ဆိုရေ အသိရင်ဘက်ထည့်မှာ ၀င်မွှ
မြို့တော် မြောက်ဦးကို မှန်းဆ
နှလုံးသားထဲ့မှာ ………….ရခိုင် ……………ရခိုင်…..
ကျောက်တုံးကျောက်ခဲတိ အလဲ လဲ အပြို ပြို
စိတ်ထဲ့ ရွှေရောင်နန်းတော်ကြီးကို မှန်းဆ
အမှန် …………..ကျွန်တော်မျက်ရည်ကျမီခရေ ။
နီမ၀င်ခင်…………ငါရို့ တိ အိမ်ပြန်ကတ်ရဖို့ မလား။
“The December the Blood-Snow drops down”
At the night of the December so cool,
The peoples celebrating Happy New Year
I whose Freedom and Land have been lost,
Didn’t wish to take part in it;
I didn’t wish to feel happy
Under the word Happy
It’sareally enjoyable one for other people,
Yet not for me, and all Arakanese as well
For our Grand Parents, Great Grand Parents
And Great Great Grand Parents Blood dropping down
Along the Rakhaing Roma Mountain
And in the whole my Father Land, Arakan Kingdom
In this month, cool December
Ohh! December, December, December!
In this month our Arakanese’s blood
Dropped down onto the Earth together with snow
Our Arakanese sacrificed their lives;
All our heritages were destroyed by Burmese
In this so cool December
Despite it’s been for over Two Hundred Years
For losing our Kingdom, our Freedom;
For our Arakanese’s blood falling down;
For Our heritage being destroyed,
I and all Arakanese can’t disappear in their mind
What happened in the past time
How I (and all Arakanese) can forget
The 31st Day of December!
(By Ven. Indobhasa)
(For unforgettable day of 31st December when our Kingdom was invaded by Burmese King, all classes of Arakanese were killed, and all our Heritages were destroyed)
ဇွဲ၊ သတ္တိအပြည့်နဲ့ ရီစီးတိကောင်းသန်ခရေ ဆို
ဇာသူယုံဖို့ သိလဲ ချင့်
မယူ မြီမှာ ခြီချ …မယူရီကိုသောက်
ဂုတ်ထက်က ဂွစီး ….လိုင်ပင်းကိုဖျစ်
ငါရို့ ဖိုးဖီး ဇူဇာရို့
ဇာတိမာန်အပြည့်နဲ့ သွိးနီကြောင်းကို ပြခရေမြစ်
ကိုယ့်စွာကို ရခိုင်လို့ တောင်ဆိုဖို့ မကောင်း
မျက်နှာ ထလန်းကား နဲ့
၀ါးတုတ်နဲ့ ခရုချေ ကို ကြိတ်မှိတ်မျို ချ
၂၁ ရာစု ဇာတ်ခုံမှာ
မင်း ဆွံအနီစွာလား။	။
“လောကသာရ ဆုံးမစာ (ရခိုင်သူမြတ်) (မူကြမ်း)”
၂. အသက်ရှည်စွာ၊ အနာမဲ့ကြောင်း၊ ကောင်းလှစီချင်၊ ပဲ့ပြင်နိစ္စ၊ ကွပ်ဆုံးမသား၊ မိဘဆရာ၊ စကားနာ၍၊ ကျမ်းစာသိမြင်၊
တတ်အောင်သင်လော့၊ပ်ါလွင် မပြု၊ ကောင်းရာတုလျှက်၊ ကောင်းမှုမြတ်နိုး၊ ကောင်းအောင်ကြိုး၍၊ ကောင်းကျိုးကိုယ်၌ တည်စီမင်း။
မိခင်ဖခင်၊ ကျေးဇူးသျှင်ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုး၊ ဂူပုထိုးသို့ ရှိခိုးဦးတင်၊ ကြည်လင်မြတ်လေး လုပ်ကျွေးခယ၊ ရိုတုပ်ကွလျှက် ကြီးလှသက်အို၊ မျိုးဆွီကိုလည်း ကြည်ညိုညွတ်တိမ်း၊ ပိုက်ထုပ်သိမ်း၍ မယိမ်းစင်းလျှင်းငြိမ်းစီမင်း –။ (အဘိုးသျှင်စာသား)
(၁၆) ပဲရည်ကို လိုက်ပေါင်းကေလည်း
ဂြိုဟ်စီး ၊ဂြိုဟ်နင်း မကောင်းခါ
တိကောင် ကိုပင် မဟောက်ထင်ခါ
နှလုံး အူကျွတ် ရပ်စောက်သိနိုင်ပါရေ
ချွဲ စိုစို နဲ့ အအီးပတ်တေပိုင်
မျှော်လင့် ယင်းနဲ့ ဆုံးရှံး ရရေခါ
ကိုယ့် ကို ကိုယ် လူတော်မဟုတ်မှန်းသိ
ကျွန်တော် ဆက်ပနာ။	။
တစ်သက်လုံး ပေါင်းကြည့် ပါ
မှန်ချပ် တည့်တည့် ရှိမှာ
ဇော်ဇော်ကြိုင် (မြို့ တောင်)
“ကျွန်တော့် တချက်ချေ စစ်တွေ”
ကဗျာ ချစ်သူဆိုရေ နာမည်ပျက်နင့်လူ
မျှော်လင့်ချက်ကို ဆွဲဆန့် ထားတုန်း
မသိမှု အားလုံးနင့် မိတ်ဖွဲ့ လိုက်တေ
၂၁ ရာစု IT မော်ဒန်
ဇာကအတု၊ ဇာက အစစ်
Distance နင့် Day
ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်နီရယင့် …ထော
ဂုဏ်မြတ် ပညာ တက်တိ
ကွမ်းနဲ့ အလင်္ကာ တမြုံ့ မြုံ့ အရသာ
လက်ဆန့် ခေါ် အဖေါ်အပြုံးတိ
ကောက်ဖီ ပလိန်းတစ်ခွက် ဖြစ်ကေ ကျီ။
အိပ်မက်ထဲ့က …………. ငါ